DAAWO Wararkii ugu Dambeeyay Gobalka Sanaag iyo Dhulbahante oo Fariin Culus loo diray - Allbanaadir Media | Allbanaadir Media
DAAWO Wararkii ugu Dambeeyay Gobalka Sanaag iyo Dhulbahante oo Fariin Culus loo diray
Kulamadii ugu dambeeyey ee ay lahayeen saraakiisha ciidamada Puntland iyo kuwii kasoo diga-rogtay Somaliland ayaa looga hadlayaa arrimaha ku wajahan difaaca gobalka Sanaag iyo sidii wadajir loogu howlgali lahaa.
Saraakiisha ciidamada iyo masuuliyiinta ugu sareysa dawladda Puntland ayaa yeeshay wada hadalo xagga telfoonka ah iyo kuwa toos ah, waxayna ka wada hadleen arrimaha Ammaanka.
Gudoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa shir gudoomiyey kulan gaar ah oo afurkii ka dib ay yeesheen dhinacyadan oo ay uga wada hadleen arrimahan.
Wasiirka Amniga ee Puntland Cabdisamad Maxamed Gallan ayaa balan qaaday, in ciidamadan cusub ay dhammaan heli doonaan xaquuqdooda si lamid ah kuwa Puntland ee kale oo hadda bil kasta hela xaquuqdooda.
Mr, Gallan ayaa ugu baaqay gobalada Sool iyo Cayn in ay ku deydaan gobonimada dadka Sanaag oo ay garowsadaan aayahooda, dibna uga soo laabtaan dabinka qorshaha Dhul-balaarsi ee ay wadaan maamulka Jeegaanta.